मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर, अझै खाली पेट, अवस्था बुझेर आवश्कय निर्णय – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर, अझै खाली पेट, अवस्था बुझेर आवश्कय निर्णय
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार March 5, 2020
‘उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु आउनेक्रम सुरु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म केही खाने कुरा दिइएको छैन,’ थापाले भने ‘डाक्टरहरुले स्वास्थ्य अवस्था बुझेर आवश्कय निर्णय गर्नुहुनेछ ।’ अस्पतालमा अहिले त्रिवि शिक्षण कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गा पुगिसेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे दैनिक कति पटक सूचना जारी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको थापाले जानकारी दिए । दैनिक एक पटक दिइने वा दुई पटक भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ । दुइ पटक दिइने भएमा विहान ११ र साँझ ६ बजेको समयमा आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुँदै गएमा ५-६ दिनमा डिस्चार्ज गरिने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण सकिएको १५ मिनेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार आधा लिटर पिसाव गरेका थिए । शल्यक्रियाको नेतृत्वको गरेका डा. प्रेम ज्ञवालीका अनुसार प्रत्यारोपणको करिब डेढ घण्टापछि ओलीको होस खुलेको थियो ।
दोश्रो पटक प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले प्रधानमन्त्री ओलीको शरिरमा राम्रोसँग काम गरिरहेको छ – चिकित्सक
समुद्रमा डुबेर अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु, काे हुन उनी ?